Iimpawu malunga noBomi kunye nokuziphatha kwePerch Yellow
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Iintlobo zeentlanzi
by UKen Schultz
I- perca e-flavescens) ngamalungu eentsapho zasePercidae zentlanzi yamanzi ahlambulukileyo, enamaqela eentlobo zezilwanyana, ezinye zazo ezingenakulungeleka phakathi kweentlanzi ezinokunambitheka kwamanzi aphelileyo. Uninzi lweentlobo kule ntsapho, nangona kunjalo, zincinci kakhulu ukuba zilandelwe okanye zidliwe ngabantu, kubandakanywa iintlobo ezili-160 zeerarter, ezimele iipesenti ezingama-20 zeentlanzi e-United States. Amalungu omndeni osondeleyo afaka i-sauger kunye ne- walleye .
Ilungu elisezantsi kakhulu elisezantsi lePercidae, ilungu le-yellow perch linye yezona zinto zithandwa kakhulu kwaye zilandelwa zonke iintlanzi zasemanzini amancinci, ikakhulukazi kumazwe aseNtshona nakumaPhondo eMntla Melika. Oku kubangelwa kubukho bayo kwibala elibanzi, ukukhululeka ngokubanzi okubanjwe kuyo, kunye nokutya kwayo okumnandi. I-perch ephuzi ithandwa ngokukhethekileyo ekulobeni kweqhwa . Abantu abaninzi banokubangela ukuba kubekho umda wokukhupha , ukuvumela abantu ukuba bafumane ukutya kweentsapho ekuphumeni.
I-perch ephuzi iluhlaza okwesibhakabhaka kwigolide ephuzi kwaye ibe nemibhobho emininzi ebanzi, ebanzi ejikelezayo ukusuka kumva ukuya ngaphantsi komgca wecala, isisu esilumkileyo, kunye neengcingo eziphantsi kwe-orange ngexesha lokuzalisa. Imizimba yabo igubungele kwaye ibonakale ibuhlungu; Oku kungumphumo wecandelo elona lincinci lomzimba oqala kwi-endorse yokuqala ye-dorsal, kwaye emva koko uthayipha kancane ukuya ekuqaleni kwexesha lesibini lokugqithisa.
Ziye zahluke kwi-walleye kunye ne- sauger ngenxa yokungabi naso kwamazinyo e-canine kunye nefom yomzimba ngokubanzi.
I-perch ephuzi ifunyenwe kwiindawo ezahlukeneyo ezifudumele kunye nepholile kwimimandla emininzi, nangona iindawo zentlanzi enkulu. Zifumaneka nakwiimithombo zamanzi, kwaye ngamanye amajelo.
Ezi ntlanzi zininzi kakhulu kwiindawo ezicacileyo, ezilwandle ezinamaqatha ezinamaqatha, isanti, okanye i-gravel. Amachibi amancinci kunye namachibi amaninzi avelisa intlanzi encinci, nangona, kumachibi amaninzi afumana uxinzelelo oluthile lokunyakaza, i-perch ephuzi ingakhula enkulu. Bahlala kwiindawo ezivulekileyo zamanxweme kwaye bakhethe ukushisa phakathi kwama-60s kunye nama-70s aphantsi.
Umxhasi we-yellow perch ukondla kwi-zooplankton enkulu, inambuzane, i-crayfish encinci, imisinyo, inambuzane yamanzi, iiqanda zentlanzi kunye nentlanzi encinci, kubandakanywa neentlobo zazo. Ngokuqhelekileyo bakholelwa ukuba bayondla kwiindawo zokukhawuleza ngokuntwela kokusa nokuhlwa, abahlala bengasebenzi emsebenzini ebusuku, kodwa iimeko apho ziyakutya kwaye phantsi kwazo zingabanjwa ziyahluka ngokubanzi kunye nekhono le-angler.
I-perch ephuzi ayinabo abaqhankqalazi abomeleleyo, kodwa emanzini abandayo kunye nokukhanyisa ukukhanya okanye ukugxotha iimpahla ezixakekileyo bazibandakanya i-angler kwimfazwe enamandla. Inqwenela yabo yokuphepha iindawo ezikudibeneyo kunye nezidaka kunye nokuhlala kwindawo ecocekileyo nepholile yokuhlala kwinyama yabo emhlophe, enesinambithe esilingana neyomzala wayo, i-walleye.
I-perch ephuzi yintlanzi yesikolo , kwaye i-anglers iwabeka emanzini avulekileyo ngexesha lonke; zingenye yeentlobo eziqhelekileyo ezibanjwe yi-ice anglers.
Baphinde babanjwe ngethuba lokunyuka kwamanzi entwasahlobo , apho bakhuphukela khona kwiindawo zokuhlaziya kwaye bafune indawo ezifudumeleyo kwiindawo zokuhlala kunye nama-back eddies. Ngokuphambili, i-perch ephuzi njengamanzi apholileyo kwaye iya kuba yinkangala enkulu esikolweni naphi na apho izinga lokushisa lomhlaba lifudumala khona, nangona liza kushukunyiswa.
Iindawo ezifanelekileyo zokuloba zihlala zikhula ngamanxweme angenanto, apho kucetyiswa ukuloba okanye ukuvala ngasezantsi. I-perch ephuzi ibanjwe kwiindidi ezahlukeneyo kunye neziqhwaba, kunye neebhokhwe eziphilayo, iimbumba eziphilayo, ezincinci-ukuxelisa ama-plugs, ama-jigs, i-jig-and-spinner combos, iipuni kunye nabaphambuli bephakathi kwezibhenkco ezilungileyo. Amancinci amancinci kunye neenwele okanye i-curl-tail-body-grub izidumbu zivelisa ngokukhethekileyo.
Iprofayile yeentlobo: i-Blueback Herring
Iprofayile yeentlobo: i-Flathead Catfish
Isikhumbuzo Sixesha Eliyintloko kwiPike enkulu yaseMntla
Iintlobo ze-Bream: i-Sunfish, i-Bluegills, i-Shellcracker, i-Warmouth kunye neNinzi
I-Weather Weather yeWalley
Njani iAnglers Inokukunceda Ukuthintela Ukusabalala Kwezilwanyana Zangaphandle
Ukuloba kweCrappie eVusika
Konke ngeDrum eDlwengileyo yamanzi Intlanzi
IiSoybe (iGlycine max) - Umlando weNdalo yeeSoybean eziMangalisayo
I-Forest Impression and Water Cycle
Indlela yokudibanisa isenzi "Sebenzisa" ngesiTaliyane
Iingcaphuno ezivela kuBob Marley Iingoma zothando, ubudlelwane kunye nosapho
I-Top 10 Alternate Skateboards
I-25 yeziThuthi zethu ezizithandayo ezithatha i-Funny Selfies
Umda wexesha le-20 leminyaka
I-iPhone ye-Funniest ye-Keyboard ye-Shortcut Pranks
I-Extension yeekholeji yase-Fort Lewis
Kebara (Israel) - I-Neanderthal Life kwiNtaba yeKarmele